युगसम्बाद साप्ताहिक - वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य
Saturday, 10.19.2019, 01:18am (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 05.27.2015, 11:39am (GMT+5.5)
देश अहिले ठूलो विपत्ति भोगाइको अवस्थामा छ । आजको ठीक एक महिना अगाडि बैशाख १२ गते आएको महाभूकम्प, १३ गते र २९ गते आएका ठूलाठूला पराकम्पन अनि एक महिनासम्म पनि आइरहेका सयौं पराकम्पनहरूले पुर्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिले नेपालीको दैनिक जीवन प्रक्रियालाई नै ठूलो संकटमा पारेको छ । बैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिको एक महिना यता आएका ठूलासाना पराकम्पनहरूले मानवीय र भौतिक क्षतिको आँकडा मात्रै प्रस्तुत गरेको नभै आम जनजीवनलाई निरन्तर त्रसित र भयभित पारिरहेको छ । महाभूकम्पले ल्याएको विपत्तिकै कारण लाखौं नेपाली जनता घरवारबिहीन भएका छन् भने गाँसवासको ज्वलन्त समस्याले उत्तिकै पिरोलिरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको यो दुःखद घडीमा उद्धार कार्य र राहत सेवाका निम्ति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट तत्काल जुटेको मानवीय सहयोग उल्लेख्य रहेको भए पनि विस्थापित नागरिकहरूको पुनःस्थापन र भौतिक क्षतिको पुनः निर्माण द्रुत गतिमा कसरी गर्ने भन्ने ठूलो चुनौति खडा भएको छ । पहिलो चरणको उद्धार र राहत कार्यमा सरकारको कार्यक्षमता र सामथ्र्यमा देखिएको कमीकमजोरी र राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता परिचालनमा देखाउन नसकेको तत्परतालाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा राष्ट्रिय विपत्तिले खडा गरेको चुनौतीको सामना कसरी हुनसक्ला भन्ने आशंका हरेक नागरिकको मनमा जागृत छ । तर पनि सरकारको सबल नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरूको संठनात्मक शक्ति र एकताबद्ध प्रयासबाट नै आइपरेको समस्याको निदानले वाञ्छित गति लिनुको अर्काे विकल्प छैन । राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न सिंगो राष्ट्र एक हुनुपर्छ, वृहद राष्ट्रिय एकता विना देशका अगाडि खडा भएको चुनौतीको सामना हुनसक्दैन । अहिले आलोचना–प्रत्यालोचना र आरोप–प्रत्यारोप होइन सवै क्षेत्र र तहबाट रचनात्मक सहयोग र सुझावको खाँचो छ । हाम्रो देश हामीले नै बनाउने हो अरूले बनाएर बन्दैन, आफ्नो क्षमता र सामथ्र्य बढाउन आफ्नै खुट्टामा हिड्नुपर्छ, अरूबाट त सहयोग मात्र लिने हो मार्ग निर्देशन होइन भन्ने तत्वज्ञान भएमात्र पुनर्निर्माणबाट राष्ट्रको काँचुली फेरिनसक्छ । बाह्य परामर्श र निर्देशन, आन्तरिक खिचातानी, जवरजस्र्त सिर्जिएको विभाजित मानसिकता र भागबण्डाको राजनीतिले दग्ध भएको मुलुकको पूर्व अवस्थामा महाभूकम्पले सिर्जना गरेको बिराट चुनौतीको सामना उनै त्रुटिहरूको निरन्तरताबाट कदापि सम्भव छैन । देश सवैको साझा हो, देश निर्माण गर्न सवै नेपालीको क्षमता, सामथ्र्य, श्रम र शक्तिको उपयोग अपरिहार्य छ । देशलाई अहिले चाहिएको नै यही हो ।
एक महिना भयो– महाभूकम्पपछिको पराकम्पन अझै रोकिएको छैन, आमजनमानसमा भूकम्पको झट्का कुन बेला कुनरुपको आउने हो भन्ने सन्त्रास अझै बाँकी छ । यसै बीचमा देशका बिभिन्न भागमा हावाहुरीले बितण्डा मच्चायो– मानवीय क्षति र भौतिक क्षति दुवै गरायो । अर्कातिर कालीगण्डकी सुख्खा पहिरोले थुनिएर अर्काे विपत्तिको शंखनाद गर्याे । अव वर्षा सुरु भएपछि चिराचिरा परेका पहाडहरूमा कति पहिरो जाने हो भन्ने मनोत्रास उत्पन्न भैरहेको छ । भूकम्पग्रस्त कतिपय क्षेत्रमा अझसम्म पनि पहिलो चरणको राहतसमेत नपुगेको जानकारी प्रवाहित भैरहेको छ । स्वतस्फूर्त रुपमा राहतसेवा पुर्याउन प्रयासरत व्यक्ति वा संस्थाहरू पनि यातायातको पहुँच नपुगेका ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । राहतको पर्खाइमा बस्ने नागरिकहरूको संख्या ठूलो छ । सरकारी पहलविना दुर्गम क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको सम्भावना नितान्त न्यून छ । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा पुनःस्थापन कार्यका लागि एकीकृत राष्ट्रिय नीतिकै खाँचो छ । पुनःनिर्माणका निम्ति आमसहमतिको राष्ट्रिय नीति तर्जुमित हुनुपर्छ भने तदनुरुपको तात्कालिक र दीर्घकालिन योजाना बनाएर कार्यक्रम तर्जुमा गरी तत्काल कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर अहिले पनि राजनीतिक वृत्तमा भागबण्डा र खिचातानीका दुष्प्रवृत्तिहरू उत्तिकै मडारिएका छन् । एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पुनःनिर्माणको प्राविधिक नेतृत्व आफूले लिनचाहेको खुलाशा गरिसकेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको नाम प्रस्ताव गरेको खुलाशा भएको छ । अर्कातिर नेकपा एमाले गृहमन्त्रालय आफ्नो मातहतमा रहेकाले विपत व्यवस्थापनको नेतृत्व गृहमन्त्रीबाटै हुनुपर्ने धारणामा छ । विपत व्यवस्थापनका निम्ति सहकार्यको चेत अझै नखुलेको बिडम्बनापूर्ण दृश्य यो प्रकरणले देखाएको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले एकीकृत कार्यक्रम बनाएर भूकम्प पीडित क्षेत्रमा संयुक्त जनशक्ति खटाउनुको सट्टा आआफ्नै ढंगले स्वयंसेवक परिचालन गर्न चाहेको प्रष्टै देखिएको छ । यसले राहतसेवा र पुनःस्थापन कार्यक्रममा पनि राजनीतिक पक्षपात र छिनाझपटीको आशंका उब्जेको छ । नेताहरूले विपत्तिको बेलामा पनि नानीदेखि लागेको बानी देखाउन छोडेका छैनन् । राजनीतिक भागबण्डा र खिचातानीको महारोगले महाभूकम्पपछिको विपत्तिमा पनि नछोड्नु मानवीयताको उपहास हो भने मुलुकको दुर्भाग्य पनि हो । यस्तो मनोवृत्ति राष्ट्रिय एकताको अपरिहार्यताका निम्ति कतै बाधक नबनोस् ।
नेपालले अहिले जुन विपत्ति भोग्नु परेको छ त्यसको सामना एक्लै गर्न नसकिने पक्कै भए पनि त्यसका निम्ति एकीकृत राष्ट्रिय प्रयासकै खाँचो छ । कुनै पनि मुलुक विदेशीको सहयोग, परामर्श र निर्देशनमा बनेको कहीँ कतै उदाहरण छैन । अहिलेको युग अन्तर्निर्भरताको युग भए पनि देश बनाउने जिम्मा देशवासीको नै हो । परनिर्भरताको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्र निर्माण वा पुनः निर्माणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने र त्यसको सदुपयोग गर्ने दृष्टिकोण, क्षमता र कला भएको नेतृत्वले मात्र मुलुकको नव निर्माणको जिम्मेवारी समाल्न सक्छ । उद्धार र राहतका नाममा अमुक–अमुक वैदेशिक शक्तिका खेलहरू कसरी मञ्चित भए भन्ने कुराको ताजा अनुभव बैशाख १२ को महाभूकम्पपछिकै स्थितिले नै टड्कारो रुपमा देखाइदिएको छ । सावधान हुनुपर्ने हामी नै हो । हाम्रो आवश्यकता अनुसारको सहयोग मात्र स्वीकार गर्ने, पुनःनिर्माणमा प्रत्यक्ष संल्गनताको चाहनालाई अस्वीकार गर्ने र आन्तरिक स्रोत र जनशक्तिको अधिकतम प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण बने राष्ट्रिय एकताको भावना मजबुत हुनसक्छ र राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्ने साहस र क्षमताको विकास हुनसक्छ । यो नै अहिलेको विचारणीय पक्ष हो ।